'Gehenna: toerana iainan'ny fahafatesana' - Sangan'asa mahasoa azo ampiharina ny sarimihetsika Indie Horror - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Gehenna: Aiza no Misy ny Fahafatesana' - Indie Horror Movie dia sangan'asa azo ampiharina
'Gehenna: Aiza no Misy ny Fahafatesana' - Indie Horror Movie dia sangan'asa azo ampiharina
nosoratan'i Admin March 26, 2015
Tsy maintsy mahita an'io ianao! Raha namono fotoana aho nanao ny horonam-bokiko Kickstarter (KS) isan-kerinandro dia nijanona avy hatrany ny masoko tamina tetikasa antsoina GEHENNA: Mipetraka ny Maty. Angamba ilay sary mahatsiravina an'ny zavaboary humanoid malemy, na ireo teny nampiasaina tamin'ny fanambarana fanokafana izay nahaliana ahy, tsy azoko antoka. Ny zavatra mazava ho ahy tamin'ny fialantsasatra dia tsy io no tetikasan'ny KS mahazatra anao.
Eto amin'ny biraon'ny iHorror.com, ny andian-jatovo dia hiady hevitra momba ny tetik'asa vaovao vatsian'ny vahoaka marobe isan'andro. Ny tena zava-misy dia noho ny zava-misy fa ny horohoro dia karazana malaza ao anatin'ireto faribolana ireto ary rehefa afaka izany rehetra izany dia manome antsika sary mihetsika izy ireo Ny Babadook. Mampalahelo fa be dia be ny duds momba ireo vondrom-piarahamonina voalaza fa tsy namoa velively. Fa mino aho GEHENNA: Mipetraka ny Maty dia hanao ny asany eo amin'ny tontolon'ny horohoro. Ireo goavambe indostrialy mahazatra izay mbola tsy niahiahy momba an'io lehilahy kely io dia tokony hanisy fiheverana an'ity andiana mpamorona sarimihetsika vaovao ity.
Ny ati-doha ao ambadik'izany rehetra izany dia i Hiroshi Katagiri (sary etsy ambony) ary izy dia angano eo amin'ny tontolon'ny vokatra azo ampiharina; fampifangaroana sary sokitra, makiazy ary effets an-tsehatra mahazatra mba hahazoana vokatra "tena izy fa tsy tena izy". Katagiri, rehefa niasa ho toy ny lehilahy mahomby amin'ny sarimihetsika toy ny The Hunger Games ary Cabin any anaty ala (jereo ny sary etsy ambony), ary ny fikosehana ny kiho amin'ny angano toa an'i Steven Spielberg, mahatsapa mazava fa fotoanany izao haka ny seza ary haneho amin'ny mpiara-miasa aminy ny fomba fanaovana azy. Zahao ny azy IMDb Eto.
Ny famakiana bebe kokoa ny mombamomba ny tetikasa KS dia nahafaly ahy tamina vatosoa kely iray hafa. mazava tsara GEHENNA: Mipetraka ny Maty dia horonantsary mahatsiravina misy vokany azo ampiharina - izay midika hoe zavaboary karazana, ary iza no tsara kokoa maneho ny toetran'ny zavaboary toy izany? Tsy misy hafa noho Doug Jones! Tena mpankafy ny asan'i Doug aho ary raha tsy fantatrao izay tiako holazaina dia menatra ianao, satria azonao antoka fa nahita zavaboary nilalaovany ianao. Miditra izy Pan's Labyrinth, Hellboy, Fantastic Four, Men in Black 2, ary mitohy ny lisitra.
(Sary etsy ambony dia i Mike Elizalde, tompon'ny Spectral Motion, miasa amin'i Jones ho The Creepy Old Man, araka ny fijerin'i Hiroshi. Mike sy Spectral Motion dia samy ao anaty sarimihetsika avokoa.)
Farany, ny teti-dratsin'ity sarimihetsika ity dia toa tany am-boalohany fa tsy fihodinana amin'ny zavatra efa hitantsika. Raha mijery ny pejin'ny bio an'i Hiroshi ianao dia tena voafehiny amin'izay mahatonga ny sarimihetsika tsara ary toy izany koa ny mampatahotra azy. Ary mazava izy amin'ny teboka fa TSY mila filanjana mihoa-pampana ianao mba hampitahorana ny olona fa kosa, asitrikao ny mpihaino anao amin'ilay tantara amin'ny alàlan'ny fampiasana teknika nentin-drazana; ny fampitahorana dia avy amin'ny fahaizany mitondra ny zavaboariny amin'ny vokany azo ampiharina fa tsy an'ny solosaina.
Izaho manokana, taorian'ny namakiako ny mombamomba ny pejy Kickstarter dia faly aho mahita ny vita amin'ity tetikasa ity. Miaraka amin'ireo mpanohana an-jatony vitsivitsy dia tsy isalasalako fa hahatratra ny tanjony izany. Raha te-ho anisan'ny Hiroshi sy ny famoronana ny ekipa ianao dia ampitao amin'ny Pejy KS ary avereno ny tetikasa. Mety hahazo sary sokitra ao an-dohanao mihitsy aza ianao Hiroshi tenany.
Daniel HegartyDoug JonesGEHENAHiroshi Katagiri
Ny zoma ho avy izao dia mahazo an'i Nickibalos an'i Nick Antosca ho mpanoratra
Fanadihadiana dia mamakafaka ireo tantara mahazatra mampatahotra holazaina ao amin'ny maizina '